Kedu ihe nwere nkochi ime akwa karịa nke ọcha? - Ihe Oriri
Isi > Ihe Oriri > Protein ke nsen ọcha ma ọ bụ yolks - azịza dị mfe nye ajụjụ
Kedu ihe nwere nkochi ime akwa karịa nke ọcha?
N'iji ya tụnyere 2.7 g nkeproteinn'imenkochi ime akwanke otu, buru ibuakwa,acha ọchaenye 3,6 g. Mgbeacha ọchaọnọprotein ndị ọzọ,nkochi ime akwa nwereihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ vitamin na mineral niile nwere mmiri na mmiriakwa.Nọvemba 1, 2019
Hey ụmụ nwoke dr Berg ebe a, geenụ ntị, anyị ga-ekwu maka nkochi ime akwa na akwa ọcha taa ọ dị mma, ihe mbụ m chọrọ ikwu maka ya bụ echiche na-ezighi ezi na akwa ọcha dị mma karịa akwa yolks egg yolks m na-ekwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ protein dị ka ìhè o nwere gram 2.7 na gram 3.6 m na-ekwu, nke ahụ dị ịtụnanya, ị nwere ike iche na ọ bụ naanị abụba na cholesterol Mba, ọ bụ protein calcium 20 ugboro 20 gbaghara m, okpukpu iri karịa calcium karịa akwa ọcha 21, 9 milligram vesos abụọ na atọ milligram maka ndị ọcha gọọmentị site na iri isii na isii isi atọ na ise milligram potassium nke ọma na-acha ọcha bụ ntakịrị karịa zinc nwere zinc karịa na ọ nwere ọtụtụ selenium karịa folate bụ B vitamin ọ nwere ọtụtụ ọzọ 812 na ihu ọma o nwere abụba niile soluble vitamin vitamin AD na K 1 na K 2 dịkwa mma ya mere ndị a bụ ihe ndị mmadụ chọrọ yana DHA ch bụ abụba dị mma nke ụbụrụ gị chọrọ ka ncheta ahụ na ihe ndị yiri ya wee ka mma.
Ya mere, obi abụọ adịghị ya na ị maara na ị na-agbapụ ndị ọcha ahụ ma na-eri yolks, ugbu a na nkochi ime akwa bụ ụzọ na-edozi ahụ karịa akwa ọcha, ọ dị mma na o nwere ọtụtụ ihe ha kpọrọ phospholipids, nke bụ isi ihe ndị gbara cell membranes ahụ. na bụ n'ezie ụbụrụ gị kwesịrị ịrụ ọrụ ya mere ọ dị ezigbo mma maka sel na ụbụrụ ụbụrụ Vitamin K2 ekwuru m na tupu ihe vitamin K2 bụ, enwere olile anya na ọkụkọ ga-eri ahịhịa ma ọ bụ ọbụna ehi ga-eri ahịhịa, n'agbanyeghị na ị na-ekwu maka ya mmiri ara ehi na ihe na-eme mgbe anyị gbanwere K 1 ka K 2 Vitamin K 2 dị iche na vitamin K1 Vitamin K1 nwere ihe metụtara coagulation ihe Vitamin K2 bụ vitamin nke na-ewepu calcium site na ebe na-ezighi ezi ebe enwere mgbatị site na akwara, ọ adọta calcium si nkwonkwo, n'ihi ya, ọ calcifies akwara, na-eme ka ọ dị ukwuu maka ẹsụhọde ọbara mgbali, akwara na-agbanwe na ọ n'ezie na-eme ka ọkpụkpụ gị anya ọma r ike na ihe siri ike ka anyị kwesịrị vitamin K2 Vitamin K2 bụ abụba- soluble vitamin ma ọ nọ na ọgazị imeju Ọ dị na bọta Ọ dị na abụba ma ọ bụ ahịhịa-nri ihe na a dell, ọ dị ka a fermented soybean, ma ọ na-atọ mara ezigbo mma na-asọ oyi ma i nwere ike na-emeju, ma vitamin K2 bụ n'ezie akwa nkochi ime akwa mgbe ahịhịa-nri. Ugbu a, ka anyị kwuo maka choline ebe choline ọ bụ vitamin B nke na - enyere aka wepụ abụba nke imeju ọ bụ ntakịrị vitamin B nke na - enyere imeju gị aka ma nyerekwa ụbụrụ aka na ọ bụ ihe mmalite nke akpọrọ neurotransmitters dị ka homonụ- dị ka e kere eke na ụjọ usoro, ma akwa na-kwajuru na choline. Ka anyị kwuo maka Biotin - biotin nwere njikọ chiri anya na protein, ọkachasị mbọ ntutu gị.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-ehichapụ akwa ọcha, dịka ọmụmaatụ, enwere protein na ya nke na - egbochi nsị nke biotin na biotin d. na-emepụta arụmọrụ ma ị nwere ike ida ntutu gị ma ọ bụrụ na ị rie ọtụtụ protein protein. Ọ ga-amasị anyị esi nri akwa ọcha ahụ ma debe nkochi ime akwa ahụ, mana ee biotin dị ezigbo mkpa ebe a ga-eme ka ọkwa kọleji gị ka njọ karịa ịkọwa na enwere choline na lecithin na akwa nke bụ n'ezie ọgwụ mgbochi nke cholesterol.
Nke a bụ eziokwu na ahụ gị na-ewepụta ọtụtụ kọlestrọl, 3,000 milligrams nke cholesterol kwa ụbọchị, nke ahụ dịka akwa 14, akwa anụ ezi nke 333 ma ọ bụ paụnd butter dị ka ọtụtụ cholesterol anụ ahụ anyị na-emepụta. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị inweta ụyọkọ ụyọkọ dị elu na àkwá, mgbe ahụ ọ nweghị ihe ị ga-echegbu onwe gị. Naanị ihe na-abawanye site na iri akwa bụ ezigbo cholesterol, ọ bụrụ na ị moreụkwuo cholesterol, ahụ gị ga-etinye ihe n'usoro, belụsọ ma ị nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa, nke n'ụzọ ọ dị obere, na mgbe ọ bụrụ na ọ bụ ya. mgbe ahụ ma eleghị anya, ị na-eri ihe dị ka uhie uhie yist osikapa, dịkwa mma dị ka wepụ nke na-enyere gị aka belata cholesterol dị ka okike.
Isi okwu ọzọ m ga - ekwu maka akwa bụ na mgbe ịzụrụ akwa, ọ na - ekwu ụdị ihe dị iche iche dị ka ọkụkọ na - agagharị ihe niile dịka ọ naghị apụta ihe ọ bụla ịchọrọ ịzụlite na ebe ịta nri, ọ dị mma, na - enweghị nri na ahịhịa, nke ahụ pụtara ọkụkọ ndị a. gaa n'azu ahihia ahihia na ahihia rie ahihia na ahihia na ihe di otu a ma anyi choro nri ma odi nma, o gha aghaghi ibu ahịhịa, n'ihi na nri ha na-eri nri ọkụkọ bụ soy na ọka na Echere m na ọ ga-adị mma na ha na-eri ahịhịa, mana nsogbu ma ọ bụrụ na ha na-eji ọka na soy emekarịa hụ na ọ bụ ihe okike n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụghị GMO na ume na-eri ọgwụ ahụhụ na ị na-eri ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ. O bu ihe nwute, otutu nri maka umu okuko na anumanu ndi ozo bu oka na soy, ma oburu na obu ihe okike, ma oburu n’azo, o bughi GMO, ya mere, bido iri akwa, nsogbu adighi ya, ana m eri akwa ano kwa ututu ma m ka di ndu Ekwenyesiri m ike na ọ ga-adịrị gị mma, daalụ maka ikiri
Ndi akwa ocha ka o bu akwa nkocha?
Ke ofụri ofụri,acha ọchaakụkụ nkeakwabụ ihe kasị mma isi iyi nkeprotein, na calorie dị ole na ole. Naakwa nkochi akwana-eburu cholesterol, abụba, na nnukwu kalori niile. O nwekwara choline, vitamin, na mineral.
Kedu ihe dị iche na nkochi ime akwa na akwa ọcha?
Nankochi ime akwabụ odo odo nkeakwa, ma nweta agba ya site na ihe ọkụkụ ihe ọkụkụn'imenri nne okuko.Akwa nkochiemere abụba, protein, na ihe ndị dị mkpa. Naacha ọchaakụkụ nkeakwa(nke a na-akpọ albumen) na-etolite gburugburunkochi ime akwamgbe e mesịrị, na-enye cushioningn'etitiẹmbrayo na shei nchebe.Jun 7, 2021
Ndi akwa nkochi ime akwa nwere protein?
Naakwa nkochi akwaamara na ọ nọ ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nri niile na abụba dị. Agbanyeghị, na mgbakwunye na nri ndị a, ndịnkochi ime akwanwekwara ihe ruru ọkara nkeproteinọdịnaya nkeakwa(3). Na nnukwuakwanke ahụ nwere ihe dịka gram 7 nkeprotein, 3 grams ga-abịa site nankochi ime akwana gram 4 site na ọcha.Ọnwa Ise 26, 2017
ọnụ ụzọ lactate
Kedu ihe ị ga - eji eri akwa ọcha?
Akwa ọchanri nwere obere kalori, ya nanaanịKalori 17 - megide 71 kwa dumakwa. Ha enweghị abụba zuru oke ma ọ bụ cholesterol, na-eme ka ha bụrụ nhọrọ a ma ama maka ndị na-ele ọkwa cholesterol ha ma ọ bụ na-arịa ọrịa shuga ma ọ bụ ọrịa obi.Akwa akwaenweghi carbohydrates ma obu shuga.Ọnwa Ise 18, 2015
Gini mere bodybuilders ji eri akwa ocha?
Azịza Ya:Gịnị mereụfọdụbodybuilders na-eri naanị akwa ọchama zere nkochi ime akwa? N'ihi naakwa ọchadị eluproteinna calorie dị ntakịrị, otu nnukwuakwa ọchanwere calorie 17 na 3.6gproteinka o megideakwayolks nke nwere nnukwu calorie ma nwekwaa obereproteinkarịaakwa ọcha(54 calorie 2.6gprotein).
Olee otu akwa ọcha kwa ụbọchị dị mma?
Hearttù American Heart Association na-atụ aro (njikọ ga-emepe na windo ọhụrụ) otuakwa(ma ọ bụ abụọakwa ọcha)kwa ụbọchịmaka ndị na-eri ha, dịka akụkụ nke agbasiri ikenri.Ọgọst 16, 2018
Kedụ ọghọm dị na nkochi ime akwa?
Ọtụtụ ọgba aghara gburugburuakwasitere n'eziokwu ahụakwa nkochi akwanwere cholesterol. Mgbeakwa nkochi akwanwere cholesterol dị elu ma bụrụkwa isi iyi nke cholesterol nri, ọ bụ abụba abụba juputara na ụba nke nwere mmetụta dị ukwuu n'ọkwa ọkwa cholesterol anyị, ya mere, ọnya ọrịa obi.
I kwesiri iwepu nkochi ime akwa?
N'ihi ọnụnọ nke cholesterol dị elu, ndị mmadụ na-atụfuakwa nkochi akwana-ewere ya dị ka ahụike na-eri naanị akụkụ ọcha.Otu akwanwere gburugburu 186 nke cholesterol, nke a na-ahụkarị na yaakwa nkochi ime akwa. Ọ bụ eziokwu naakwa nkochi akwanwere cholesterol dị elu, mana ọ dịghị njọ dịka e siri kwuo ya.Ọ dị 15, 2019
Gini mere ndi mmadu ji eri akwa ocha?
Otú ọ dị, enwere arụmụka mgbe nile banyere otú àkwá si enye aka na ọkwa cholesterol mụbara nke a na-ahụkarị naakwankochi ime akwa, nke mere na ọtụtụndị mmadụhọrọ makanaanị akwa ọcha.Iri sọọsọ akwa ọchakama nke dum nwere ike belata calorie, abụba na abụba juputara na ị na-eri.Eprel 26, 2018
Kedu nke nwere protein, yolk ma ọ bụ White?
Ndị ọcha na-enye ntakịrị ihe karịrị 50% nke protein dị na akwa. Ná nkezi, akwa ọcha na-enye ihe dị ka gram anọ ebe yolk na-enye n’etiti 2-3 gram nke protein. Akwa nkochi nwere ihe dị ka 99% nke abụba maka akwa wee nye ihe dị ka calorie 55, mana akwa ọcha na-enye naanị calorie 17. Ya mere,
Kedu gram protein dị n'ime akwa ọcha?
Carbs (g): .61. Protein (g): 2.7. Cholesterol (mg): 210. Ọ bụrụ na ị bụ ihe ọhụrụ na isi nri, ị nwere ike ikewapụ ọcha na nkochi ime akwa na ụzọ ole na ole. Nke kachasị mfe bụ ịgbawa akwa ahụ na ọkara wee were mkpoko 2 wee wụsa nkochi ime akwa na azụ rue mgbe akwa ọcha niile ga-awụpụ.
agbasa ọgwụ iri riri 10 nzọụkwụ
Kedu ihe dị iche na akwa ọcha na nkochi ime akwa?
Ihe ọcha nke otu akwa buru ibu nwere ihe dị ka gram 4 nke protein. N'ozuzu, a na-ewere ndị ọcha dị ka protein zuru oke n'ihi na ọ nwere 9 amino acid chọrọ. Calories: E nwere nnukwu ihe dị iche na etiti calorie dị na nkochi ime akwa na ọcha.